Seattle Public Utilities – Biyo. Bulaacada & Wasakh Mareenka. Wasakhda. Dhamaan waa la daboolayaa.
U ADEEGA WAREEGA BIYAHA. ISKAASHIGA NOLOSHA CAGAARAN.
Biyo. Bulaacada & Wasakh Mareenka. Wasakhda. Dhamaan waa la daboolayaa.
Adeegyada Shacabka Seattle (Seattle Public Utilities) waxa ay bixiyaan adeegyada maamulida biyaha iyo wasakhda oo ay siiyaan 1.5 miyan ruux oo ku nool Seattle oo dhan. Waxa aanu nahay adeeg bixiye bulshada ah oo diirada saara ilaalinta caafimaadka shacabka iyo deegaanka oo leh amaanka biyaha la cabo, nidaamyada bulaacadaha iyo wasakhdu marto oo wax ku ool ah, iyo adeegyada wasakhda adag. Waxaanu kuu dadaalnaa adiga – iyo jiilasha soo socda.
Eeg Qorshaheena Khidada Ganacsi
Waxa aanu danaynaa deegaanka, oo maaha magaaladeena oo kaliya. Waxa aanu ilaalinaa biyaha heer kasta oo wareegooda ah, waxaanu samaynaa maalgelin isdhaxgal iyo sinaan oo maamulida biyaha ah, waxaanu yaraynaa wasakhda kaarboonka, oo waxaanu si wanaagsan uga shaqaynaa sidii wasakhda eber looga dhigi lahaa. Barnaamijyadeena dhawaan waxaa kamid ah:
Xarunta Tayada Biyaha South Park
Waxa aanu wakhtigan qorshaynaynaa xarun tayada biyaha oo lagu sufeeyo biyaha roobka ee nidaamka bulaacadaha ee ku darsamada Biyomareenka Duwamish. Kahor inta aanaan ka shaqaysiinin xarunta tayada biyaha, waxa aanu dhisi soonaa xarunta bam gareeya oo marka danbe u jeedin doona biyaha qul qulaya xarunta tayada. Xaruntan waxa ay gacan ka gaysanaysaa in biyaha roobku ay ku dhacaan Biyomareenka oo la yareeyo roobabka jidka maraya.
Gaadiidka Hawada U Wanaagsan
Waxa naga go’an in aanu yarayno isticmaalka shidaalka iyo wasakhda hawada iyada oo aanu kordhinayno isticmaalka teknooloojiyada agabka deegaanka u wanaagsan. Qorshahe Hawleedkeena Gaadiidka Hawada U Wanaagsan (Green Fleet)waxa lagu yareeyaa wasakhda gaadiidka, iyada oo hadafku yahay in la yareeyo wasakhda hawada boqolkiiba 50 2025 iyo kaarboonka la gaadhsiiyo heerka caadiga ah 2050. Gaadiidka Hawada U Wanaagsan waxa uu sidoo kale ka dhigi doonaa tusaale Seattle inay u noqoto magaalooyinka Maraykanka ee isbadalka la dagaalanka cimilada.
Biriish Hoosaadka Kaydka Ship Canal
Waxa aanu dhisaynaa biriish hoosaas kayd ah oo dhulka hoostiisa ah oo 2.7 mayl ah si loo yareeyo xadiga wasakhda galaysa biyaha daadka ah (roobka) iyo bulaacada galaysa Lake Washington Ship Canal, Salmon Bay, iyo Lake Union ee nidaamkeena bulaacadaha.
Waxaan halkan u joognaa in aan ku caawino
Waxa aanu fahansanahay in macaamiisheenu ay leeyihiin dakhli hoose ama ka kala go’ay, ama ay ku adag tahay inay bixiyaan kharashka adeegyada, markaa waxa aanu siinaa barnaamijyo ka caawiya.
Barnaamijka Qiimo Dhimiska Adeega
BarnaamijkeenaQiimo Dhimista Adeega (Utility Discount) waxa uu siiyaa kaalmo dadka waayeelka ah, dadka laxaadka la’, iyo macaamiishaa uu dakhligoodu hooseeyo. Eeg hadii adiga ama jaarkaagu uu u qalmo oo onlayn ku dalbo maanta.
Kaalmada Gurmadka Degdega ah
Hadii aad u baahan tahay kaalmo degdeg ah oo kharash aad hore u bixisay ah, waxa aad u qalmi kartaa kaalmada xaalada degdeg ah. Nagala soo hadal (206) 684-5800, oo waxa aanu kaaga jawaabi doonaa su’aalaha aad qabto.
Waanu ognahay inuu wakhtigan yahay wakhti adag. Marka laga tago joojinta kharashka ganaaxa ee la daahida iyo in la iska jaro kaalmadeena kharashka COVID waxaa lagu heli karaa Barnaamijka Qiimo Dhimista Adeegyada oo waxa ay keentay qorshayaal bixin oo dabacsan.